Pamukkale Express | RayHaber | raillynews
Wadooyinka Tareenka Pamukkale Express iyo Qiimaha Tigidhada
Pamukkale Express waa tareenka Gaadiidka TCDD oo si joogto ah u dhexeysa Denizli iyo Eskişehir. Kaliya gaariga curyaaminta ayaa saaran tareenka. Rakaabka laga raaco tareenka oo leh nidaamka kursi 2 + 1 [More ...]
Qiimaha tikidhada Pamukkale Express: Pamukkale Express, 19 Janawari 2015 oo laxiriira Isgaarsiinta Xawaaraha Sare ee ka timaada Eskişehir (YHT) ayaa duulimaadyo bilaabay, Pamukkale Express, Eskisehir ilaa Eskisehir iyadoo la raacayo tareenada caadiga ah, Istanbul laga bilaabo Eskisehir [More ...]
Eastern Expresses, sida socdaalka dalxiiska ee İzmir!
Ka dib East Express, 5 waxay la timaadaa dalxiis cusub oo dalxiis. Taurus, Aegean, Pamukkale, Van Lake iyo Koonfurta Kurtalan Express ayaa la diyaarin doonaa, waxayna u shaqeyn doonaan 'dalxiis dalxiis'. Dalxiiska muujiyay in Turkey mahad [More ...]
Safar dheeraad ah oo loogu talagalay YHT ee Bayram, Waddooyin dheeraad ah oo loo maro Tareenada Gobol
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa xusuusiyay in malaayiin muwaadiniin ah ay u safrayaan fasaxa Ramadan. [More ...]
Safar dheeraad ah oo loogu tala galay YHT ee Ramadan
Duulimaadyo dheeri ah oo dheeri ah oo xawaare sare ah (YHT) waxaa sameyn doona TCDD Taşımacılık AŞ bisha 31 May iyo 1-8-9 Juun ee Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) Sababta Ramadaanta awgeed. 11.15 ka Ankara iyo 17.00 ka socda Istanbul (Söğütlüçeşme) [More ...]
5 Dalxiiska Cusub ee Cusub ayaa imanaya sida Bariga Express
5 waa muuqaalka dalxiis ee cusub ka dib East Express. Toros, Aegean, Pamukkale, Van Lake iyo South Kurtalan Expresses ayaa loo diyaarin doonaa sidii 'dalxiis dalxiis'. Burak Erdem oo ka soo jeeda Sabaax [More ...]
Turkey 2018 in Labaad Great Tareen shil ku gaartay musiibadii
Ka dib shilkii tareenka ee ay ku dhinteen dadka 24 ee magaalada Çorlu bishii Luulyo, hadda waxaa shil tareen xawaare sare ku socday Ankara. 16 sanadihii ugu dambeeyay ee 11 shilkaan. “shil” tareen dhimasho iyo dhaawac ah [More ...]
Dhegeysiga Dhegeysiga Dhegeysiga Dhimirka Maqnaanshaha Pamukkale Express
Dhageysiga gabadha curyaanka ah ayaa ku dhacday tareenka rakaabka ee magaalada Dinar Afyon, waxayna ku dhimatay magaalada Yaka oo ka agdhow tuulada. TCDD Pamukkale Express, oo socodsiisa Eskişehir-Denizli, waxay ku taalaa tuulada Yaka ee degmada Dinar, oo ka soo horjeedda xarkaha. [More ...]
Waxaa jiray mar hore Adapazari Express
jidadka waaweyn xisbiga AK ee Turkey, ayaa sidoo kale soo saaray in mashaariicda waaweyn iyo sidoo kale buundooyinka tareenka. Ma lihi istiraatijiyadda "Tareenka Xawaaraha Sare .. YHT waa boon weyn Turkey oo waa inuu ahaado mid baahsan. Laakiin masaafo dheer [More ...]
Gendarmerie Explosive Pamukkale Express
Gendarmerie waxaa laga raadiyey Pamukkale Express: Kooxo ka tirsan Taliska Gobolka ee Denizli, Amarka guud ee ilaalinta nabadgelyada guud, amniga iyo amniga inta ay ku jiraan dadaalada lagu xaqiijinayo raadinta Pamukkale Express. dheeraad ah [More ...]
Lifaaqyo dheeraad ah oo loogu talagalay Looxadaha YHT
Khadad dheeri ah ayaa la saaray khadadka YHT: Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa cadeeyay in Muwaadiniinta 9-25 milyan ay bixi doonaan sababtuna tahay Maalinta 30 ee Ciidda Ciidda. [More ...]